ल हेर्नुस् त कति बदमास! हचुवामा नम्बर थिचेर युवतीलाई अश्लिल गाली गर्दै – PathivaraOnline
Home > अपराध > ल हेर्नुस् त कति बदमास! हचुवामा नम्बर थिचेर युवतीलाई अश्लिल गाली गर्दै
ल हेर्नुस् त कति बदमास! हचुवामा नम्बर थिचेर युवतीलाई अश्लिल गाली गर्दै
admin April 30, 2018 अपराध	0
झापा । हचुवामा नम्बर थिचेर युवतीलाई अश्लिल गाली गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोकको साविक काभ्रे–५ घर भइ हाल झापाको मेची नगरपालिका–१० बस्ने ३० वर्षीय श्यामकृष्ण तामाङ भनिने श्यामकृष्ण सार्की छन् । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, अनारमनीले सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनलाई बिर्तामोड–५ स्थित इलाम स्टेण्डबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कृष्ण कोइरालाले बताए ।
उनीबाट हालसम्म ७ जना पीडित भएको खुलेको छ’, उनले भने, ‘उनले मोबाइलबाट समेत र्‍यान्डम्ली कल गरेर केटीले उठाए अश्लिल गाली गर्ने र भेट्न बोलाउने नभेटे फेक आईडी बनाएर हैरानी दिने गरेको उजुरी परेपछि नियन्त्रणमा लिएका हौं ।’
प्रहरीका अनुसार उनी एक सार्वजनिक यातायातमा ‘कन्डक्टर’ को रुपमा कार्यरत् थिए । उनले ९८०५३९७४९८ नम्बरको सीमबाट युवतीहरुलाई आतंकित बनाइरहेका थिए । उनले त्यो सीम कार्ड समेत ‘फेक’ आईडी प्रयोग गरेर लिएका थिए । उनीमाथि सार्वजनिक अपराध ऐन, २०२७ अन्तरगत म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान थालिएको छ ।
यो कलीमा के सम्म देख्न पाइन्छ! हेर्नुस् त सबैलाई चकित पार्दै भोजपुरमा घट्य‍ो यस्तो काण्ड!
तासकाे कार्ड जस्तै फिटेर भविष्य बताउँछिन क्षमता ढकाल, कसरी? – भिडियोमै हेर्नुहाेस
यी नेपाली चेलीहरु जो बिदेशका ठुला बोइङहरुमा एयर होस्टेज छन् !
मध्यराति बानेश्वरमा असईले नै रेस्टुरेन्ट मालिकलाई पेस्तोल तेर्साएपछि…
दुई बालबालिका आफ्नै घरमा मृ’त भेटिएपछि गाँउ नै शोकमा डुव्यो